किशोर नेपाल, भाद्र ५, २०७३
अर्चना खुसी छिन् । आफ्नो अभिनय जीवनको प्रारम्भ नै माधवीजस्तो महत्वपूर्ण नाटकबाट गर्न पाएकोमा । नारी संवेदनाका हिसाबले नाटक समकालीन समयमा दूरगामी महत्वको भएकाले पनि उनी खुसी छिन् । नाटकमा अश्वमेधी घोडाहरूको यतिविधि चर्चा भएकाले रिहर्सलका बेला उनी ठट्टा गर्थिन्, यो नाटकको शीर्षक घोडा नराखेर किन माधवी राखिएको होला ? माधवीले अभिनय कलाप्रति अर्चनाको मोह बढाएको छ ।
किशोर नेपाल, श्रावण ३२, २०७३
दि कफी ब्वाइ । कसरी कफी ब्वाइ बने दुर्गा श्रेष्ठ ? रामेछापको फुलासी गाउँबाट ‘पैसा कमाउने’ मुख्य लक्ष बनाएर काठमाडौं छिरेका यी सामान्य युवकको जीवन यात्रा निकै रोचक छ । १० वर्षअघि एसएलसी पास गरेपछि उनी पहिलोपल्ट काठमाडौं आएका थिए ।
किशोर नेपाल, श्रावण २४, २०७३
मोमिलाको कुनै अर्को नाम राख्ने हो भने त्यो नाम हो— निर्भीकता । उनी भन्छिन्, ‘यो राम्रो होइन, तर अहिलेको साहित्यमा चलेको छ गुटबन्दी । साहित्य गुटबन्दीमा फसेपछि राम्रा सिर्जनाहरू अँध्यारोतिर धकेलिन्छन् ।
किशोर नेपाल, श्रावण १८, २०७३
यो कथा हो लहान बजारका कान्छा–कान्छीको । यस्ता कथाहरू प्राय: हराउँछन् । राजमार्गको छेउमा सामान्य रेस्टुराँ चलाउने एक जोडी मानिसको लगनशीलता र मेहनतको कथा ।
नयाँ पुस्ताका जीवा
किशोर नेपाल, श्रावण १०, २०७३
मेरो देशको हरियो पासपोर्ट मेरा लागि सबैभन्दा बलियो पोसेसन हो । जुन दिन यो हरियो पासपोर्ट छाड्नेछु त्यो दिन म र मेरो अस्तित्वको समाप्ति हुनेछ ।
अभया—एक गीत, एक अनुभूति
किशोर नेपाल, श्रावण ४, २०७३
अभया भन्छिन्, ‘केटाहरू केटीलाई छुच्ची भन्छन्, एटिच्युड देखाउँछे भन्छन्, हातपातसम्म गर्न सक्छन् । मैले आफूलाई त्यसको प्रतिरोध गर्न सक्ने साहसी बनाएको छु ।